Ugu Weyn Ee Irga
Sida loo diyaariyo irgu xilliga jiilaalka: cuntooyinka banaan
Irga waa bakeer yar oo yar ama mid dhexdhexaad ah (0.8-1.8 cm dhexroor) buluug madow, yaraa oo casaan ah. Buunku waa mid aan qabyo ahayn oo adag. Waxaa laga heli karaa labadaba beeraha beerta iyo duurka. Warshadu waxay bilaabmaysaa inay hore u qaadato, dalaggu sida caadiga ah waa badan yahay. Sidaa darteed, beerista shadberry on santuuqyada dhulka waa hawl faa'iido iyo fudud.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Irga 2020